Izindaba - Ipulangwe likakhonkolo eliqinisiwe eliphelele
Amapulangwe wesikhunta aqinisiwe aphelele
Engxenyeni yesibili yonyaka ka-2015, ikhasimende lenkampani yethu eligxile ekukhiqizeni amapayipi okuhambisa ukhonkolo lisithumelele imidwebo ethile. Umkhiqizo emdwebeni wawungukukhuphuka. Lokhu kukhwezwa kungenziwa ngensimbi yensimbi noma insimbi yensimbi. Kodwa-ke, ukukhishwa kwensimbi kulula ukugqashula. Ngokuya ngemvelo yokusebenzisa yekhasimende, sincoma amakhasimende ethu ukuthi asebenzise ukusakaza kwensimbi. Ngenxa yokuthi izinsimbi ezisikiwe zinamandla kakhulu, akulula ukugqashula. Futhi sitshela ikhasimende ukuthi sizosebenzisa okokusebenza okwenziwe ngensimbi ekubunjweni ukuze sikhiqize lo mkhiqizo. Ikhasimende lethu lijabule kakhulu ngokwamukela isiphakamiso sethu, ngoba bebesebenzisa izingxenye zensimbi ezilahliwe, obekulula ukuziphula futhi bekungelula ukuzilungisa. Kamuva, sanquma inqubo ukukhiqizwa ngokuvumelana imidwebo: thusi - annealing - machining anolaka - Welding- qeda machining, futhi wanikeza ikhotheshini yethu ngokusekelwe kule nqubo.
Ngemuva kokuthi ikhasimende liqhathanise intengo nobuchwepheshe bokukhiqiza nabanye, ikhasimende linqume ukubeka i-oda kithi.
Ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo, siphakamise nokuthi sizokwenza isampula yokuhlola ngaphambi kokukhiqizwa ngobuningi. Ikhasimende lavuma ngokushesha.
Ngemuva kwalokho, saqala ukukhiqizwa kwamasampula ngokuya ngenqubo yokukhiqiza eyayinqunyiwe ngaphambilini. Ngemuva kwenyanga, isampula laqedwa. Sihlole isampula ngokuya ngezidingo zobuchwepheshe, futhi isampula belifaneleke ngokuphelele. Ukubekezelelana ngobukhulu kungaphakathi kobubanzi obuvumelekile, futhi ukuphela kobuso bendawo yokusebenza kungaphansi kweRa3.2.
Ngemuva kokuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo iyafaneleka, sithumele incwadi yesimemo kumakhasimende ethu. Ngencwadi yesimemo, ikhasimende laqedela ngokushesha isicelo se-visa futhi lafika eChina ekuqaleni kukaJanuwari 2016.
Silande ikhasimende laya efektri, sathatha ikhefu, sahamba nekhasimende laya e-workshop. Ikhasimende lihlole amasampula ngokungathi sína kakhulu, besilinde ngokukhathazeka isiphetho futhi ekugcineni sathola impendulo: ephelele! Iphelele!
I-oda lifake ama-4300pcs wamapulangwe wepuleti aqinisiwe kakhonkolo, isisindo esiphelele singama-360tons
Siyabonga amakhasimende ethu ngokuthembela nokusekela kwabo!